Yini Magnesium L-threonate?
I-Magnesium L-threonate (778571-57-6) ivelela njengohlobo lwamaphilisi we-magnesium olumuncwa kakhulu emakethe namuhla. IMagnesium ingumbiwa ojwayelekile ongaba khona ekudleni okwehlukile futhi ubaluleke kakhulu empilweni yomuntu njengoba isetshenziswa ekuphenduleni kwamaselula angaphezu kwama-600 emzimbeni wakho.
IMagnesium L-threonate inelungelo lobunikazi ngaphansi kwegama elithi Magtein futhi ukuphela komuthi okhombise ukuthi uyasebenza ekuthuthukiseni amazinga e-magnesium ebuchosheni. Zonke izitho noma iseli emzimbeni wakho zidinga i-magnesium ukwenza imisebenzi yayo kahle. Le minerali inegalelo empilweni yethambo, imisipha, inhliziyo nokusebenza okulungile kobuchopho.
Ngakolunye uhlangothi, i-magnesium iyasiza ekwelapheni izinkinga zokulala. Kunezinhlobo eziningi zokulekelelwa kwe-magnesium emakethe namuhla, kufaka phakathi i-magnesium oxide, i-magnesium citrate, ne-magnesium chloride. Lezi zinhlobo zonke zisetshenziselwa ukwenza ngcono amazinga wamaminerali emzimbeni kanye nokusiza ekuthuthukiseni imisebenzi yeseli nezitho zomzimba.
Izindaba ezinhle yilokho i-magnesium L-threonate powder itholakala kalula ku-inthanethi nasezitolo eziseduze nawe. Kodwa-ke, qiniseka ukuthi uthola imishanguzo yomuthi kochwepheshe bezokwelapha ukuze uthole imiphumela engcono.
Njengoba i-magnesium L-threonate inenzuzo ohlelweni lwakho lomzimba, kungaholela emiphumeleni emibi kakhulu lapho isetshenziswa kabi noma ngokweqile. Njengokuthi lapho uthatha noma iyiphi enye i-nootropic, efaka udokotela wakho kuyo yonke inqubo yomthamo ikuqinisekisa ngemiphumela esezingeni eliphakeme nehle.
Kwenzeka kanjani I-Magnesium L-threonate ukusebenza?
Ngokuyinhloko, umsebenzi we-magnesium L-threonate ukwandisa amazinga e-magnesium ohlelweni lomzimba wakho futhi usize ekuthuthukiseni ukusebenza kwamaseli akho onke nezitho zomzimba kusebenza. Njengoba kushiwo ngaphambili, i-magnesium idlala indima ebalulekile ukusiza ukusebenza kahle kwamaseli womzimba wakho.
I-Magnesium mineral iyatholakala ngezinsuku ezahlukahlukene zokudla okuthatha nsuku zonke. Kodwa-ke, kwesinye isikhathi amazinga amaminerali angahle ehle futhi akuveze ezimweni zempilo ezahlukahlukene. Isibonelo, amazinga aphansi we-magnesium angaholela ezinkingeni zemood, ukudangala, ukukhathazeka, ukuzizwa kwenhliziyo, ikhanda, ne-migraine. Abasubathi nabo bahlushwa imisipha yokulimala kanye namawele lapho behluleka ukuthola i-magnesium eyanele ezinhlelweni zabo zomzimba.
Phezu kwe-magnesium enempilo etholakala ekudleni kwakho, uma amaminerali akwanele ukwenza umsebenzi ofanele wamaseli akho nezitho zakho zomzimba, udokotela wakho angakuyalela iMagnesium L-threonate. Imizimba yabantu ihlukile, futhi ngenxa yalokho, akuyena wonke umuntu ozoba nezinkinga ezifanayo lapho ehlushwa ukuntuleka kwe-magnesium. Kodwa-ke, iMagnesium L-threonate ibonakalise ukuthi iyisengezo esinamandla sokukhulisa amandla. Ngokuya ngezinga lakho lokushoda kwe-magnesium, iMagnesium L-threonate iletha izinzuzo ezinkulu uma isetshenziswa kahle.
Lapho usuthathe umthamo wakho we-Magnesium L-threonate, umuthi ugxila ohlelweni lwakho lomzimba ngokushesha bese uqala ukusebenza ngokushesha. I-magnesium eyanele emzimbeni wakho iba impumelelo umsebenzi wokucabangela kanye nenkumbulo, ukuthuthukisa ukusebenza kahle kwezicubu zomzimba nezinzwa kanye nokukhulisa ezinye izingxenye zomzimba ezanele ukusebenza. Esiswini sakho, amaminerali we-magnesium adlala indima ebalulekile ekudambiseni ama-asidi wesisu futhi ahambise ukuhamba kwezitulo emathunjini.
Is I-Magnesium L-threonate ulungele ukulala?
Yebo, iMagnesium L-threonate ilungele ukulala. Abantu abaningi banezinkinga uma kuziwa ekutholeni ukulala okuhle, futhi ukuphula umjikelezo wokuqwasha kungaba nzima kakhulu. Ungashintsha indlela yakho yokulala noma unciphise ukudla okwenziwa nge-caffeine kodwa nokho wehluleke ukuthola imiphumela oyifunayo. Kodwa-ke, ukuthatha izithasiselo ezinjengeMagnesium L-threonate kungakusiza ekutholeni ukulala okuhle.
I-mineral efana ne-magnesium inemiphumela ehlukahlukene ohlelweni lwakho lomzimba olukhuthaza ukulala. Ngakho-ke, ukuntuleka kwe-magnesium kungahle kuholele ezimweni zempilo eziholela ukuqwasha. I-Magnesium L-threonate, ngakho-ke, izothuthukisa imisebenzi yomzimba neyamaselula eyokugcina ikusiza ekulaleni. Ekukhuthazeni i-magnesium yokulala idlala izindima ezilandelayo emzimbeni wakho;
(1). Siza umzimba nengqondo yakho ukuba uphumule
Ukuze uthole ukulala okuhle, ubuchopho bakho nomzimba kumele kuphumule. Amazinga we-magnesium anele ohlelweni lomzimba wakho asiza ekuphumuleni kwengqondo nomzimba wakho ngokwenza uhlelo lwezinzwa lwe-parasympathetic, olubhekele ukuzola nokuphumula amasistimu omzimba wakho. I-Magnesium ilawula ama-neurotransmitters, anesibopho sokuthumela amasignali kuyo yonke ingqondo yakho nomzimba. Ngakolunye uhlangothi, futhi ilawula i-hormone melatonin ebhekele ukuqondisa imijikelezo yokulala.
I-Magnesium ibopha i-gamma-aminobutyric acid (GABA) receptors, okuyi-neurotransmitter ebhekele ukwehlisa umsebenzi wezinzwa. I-GABA yi-neurotransmitter efanayo esetshenziswayo ekwenziweni kwemithi yokulala efana ne-Ambien. Ukuthulisa uhlelo lwezinzwa kulungisa ingqondo nomzimba wakho ukulala.
(2). Ukushoda kweMagnesium kuphazamisa ukulala
Ukushoda kwamaminerali we-magnesium anele emzimbeni wakho kuholela ezinkingeni zokulala noma ukuqwasha. Ngakho-ke, iMagnesium L-threonate ibalulekile ekwenzeni ngcono amazinga amaminerali emzimbeni wakho ukukuqinisekisa ukulala kwekhwalithi. Ucwaningo lwezokwelapha lubonisa ukuthi amazinga we-magnesium afanelekile ekulaleni okujwayelekile. Kodwa-ke, womabili amazinga aphezulu nephansi we-magnesium angaholela ezinkingeni zokulala, yingakho kungakuhle ukuthi uyohlolelwa udokotela ngaphambi kokuba uqale ukuthatha i-magnesium L-threonate isilinganiso.
Izizathu ezahlukahlukene nezimo zezempilo zingadala ukuntuleka kwe-magnesium. Isibonelo, izifo zokugaya ezithinta umgudu wokugaya ukudla wakho kungenza ukuthi kube nzima emzimbeni wakho ukuthola amaminerali namavithamini kahle, okuholela ekusweleni kwe-magnesium. Isifo sikashukela nokungahambisani ne-insulin kubuye kuxhunyaniswe nokulahleka okukhulu kwe-magnesium.
Ubudala buyisici futhi njengoba abantu abadala sebephuza ukudla nge-magnesium encane kunabantu abadala abancane. Lokho kusho ukuthi abantu abadala asebekhulile basengozini enkulu yokuhlaselwa yizimpawu zokuntuleka kwe-magnesium njengezinkinga zokulala. Abaphuza kakhulu utshwala kungenzeka futhi babe nokuntuleka kwamaminerali. I-magnesium eyanele isho ukuthi uzothola ukulala okuthuthukile, kulapho-ke iMagnesium L-threonate iza kahle.
(3). Ilawula ikhwalithi yokulala
I-Magnesium kukusiza ukuba uthole ukuphumula nokulala okujulile. Umthelela wamaminerali ohlelweni lwezinzwa wenza kube lula kuwe ukuba ube nobusuku bekhwalithi yokulala. I-Magnesium ivimba ama-molekyuli ekubophweni ngama-neurons, ngaleyo ndlela anciphise uhlelo lwezinzwa, oluholela ekulaleni okuhle. Izifundo ezahlukahlukene zikhombisile ukuthi i-magnesium ibaluleke kanjani ekuthuthukiseni ukulala. Njengamanje, ucwaningo luqinisekisile umthelela we-magnesium ekuxazululeni izinkinga zokulala phakathi kwabantu abadala asebekhulile.
Brain rukukala impact yeMagnesium L-Threonate
IMagnesium L-threonate yayinelungelo lobunikazi ngemuva kokutholakala kwekhono layo lokuthuthukisa amazinga e-magnesium ebuchosheni. Lesi sidakamizwa singena masishane ohlelweni lomzimba futhi singene engqondweni ukunika amandla i-magnesium ukuthi iguqule izimpawu zokuguga kobuchopho ezinjenge-attention deficit disorder (ADHD). Lokhu ADHD kukhula kancane ngokuhamba kweminyaka, futhi kungenzeka kube nzima ukukuqaphela ekuqaleni, kepha isimo sihlotshaniswa nokwehla kwengqondo.
Abantu abadala asebekhulile badla ukudla nge-magnesium encane, echaza ukuthi kungani ukuntuleka kwe-magnesium kuvame phakathi kwabo. Kukhona nezinye izimo zempilo njengezinkinga zokugaya kanye noshukela okwehlisa amazinga e-magnesium emzimbeni. I-Magnesium ithuthukisa amandla okusebenza kwemizwa ehlukahlukene, amaseli emisipha nezitho zomzimba ezihlukile.
I-magnesium enganele ebuchosheni iholela ezinkingeni ezinjengokukhubazeka kokulala, ukukhathazeka, ukucindezelwa, futhi futhi kuthinta imisebenzi yememori nokuqonda. Kodwa-ke, imiphumela ingahlukahluka kumuntu nomuntu, kepha i-magnesium L-threonate ingazixazulula ngokwandisa amazinga amaminerali engqondweni yakho.
Izifundo ezahlukahlukene zezokwelapha kanye nokuhlolwa kufakazele amandla we-magnesium L-threonate ekubuyiseleni emuva izindlela zokuguga kobuchopho. Ukutholakala okugqamile lapho kutholakala ukuthi iMagnesium L-threonate ingahlehlisa ngaphezulu kweminyaka eyisishiyagalolunye yemiphumela yokuguga ebuchosheni. Lesi sidakamizwa sandisa ukuminyana kwama-synapses, okuwukuxhumana ukuxhumana phakathi kwamaseli akho obuchopho - ukulahleka kwesisindo se-synaptic kubangela ukwehla kwengqondo kanye nokuncipha kobuchopho.
Ucwaningo lukhombisa ukuthi ukuphathwa kwamaviki kwe-Magnesium L-threonate kuqinisa ukusebenza kwengqondo futhi kubuyisela emuva ukuguga kwengqondo. Imvamisa, ubuchopho buyehla njengoba ukhula ngenxa yokwehla kwezinombolo kanye nokusebenza kwamangqamuzana obuchopho kanye namabhodi wazo wokushintsha ingqondo, okubizwa ngawo ngama-synapses.
Ukulahleka kwama-synapses yisona sizathu sokuqala sokwehla kokuqonda. Ngakho-ke, ikhono le-Magnesium L-threonate lokukhulisa ukuminyana kwe-synapses likwenza kube yinkumbulo enhle kakhulu kanye nokwengezelela kokukhulisa ukuqonda emakethe namuhla. Lapho amazinga we-magnesium ebuchosheni bakho enele, ungaqiniseka ngokuguqula izinkinga zokuguga kobuchopho. Ukuhlolwa kwezokwelapha ngaphambi, ngesikhathi, nangemva komjikelezo wesilinganiso kuzodingeka ukuqapha inqubekela phambili yemithi.
Yini enye izinzuzo ze-magnesium L-threonate?
Impilo yobuchopho nokuthuthukisa ikhwalithi yokulala akuyona ukuphela kwezinzuzo ozozithola ngokuthatha iMagnesium L-threonate. Umuthi udlala indima ebalulekile ekuthuthukiseni amandla okusebenza cishe kuwo wonke amaseli nezitho zomzimba emzimbeni wakho. I-Magnesium ngamaminerali abalulekile umzimba wakho odinga ukusebenza kahle. Nazi ezinye Izinzuzo ze-Magnesium L-threonate;
(1). Nciphisa Ukucindezeleka Nokukhathazeka
Lezi zimo ezimbili zivame kakhulu kubantu abaningi kulezi zinsuku, futhi kunezizathu ezahlukene zokuthi zibangelwa. Kodwa-ke, i-magnesium ikhombisile amandla ayo okulawula nokudambisa ukudangala nokukhathazeka. Kakhulu, lezi zimo ezimbili zengqondo zihambisana nokushoda kwe-magnesium. Ngakho-ke, uma ulahlekelwa ngokwanele kwalesi simbiwa emqondweni wakho, kungenzeka ukuthi uhlushwa ukudangala nokukhathazeka.
Ikhono leMagnesium lokunciphisa uhlelo lwezinzwa lusiza ekunciphiseni ukuphazamiseka kwemizwelo emibili. Ukukhathazeka nge-magnesium L-threonate kufanele kuthathwe ngaphansi kwemiyalo kadokotela ukuthola imiphumela engcono.
(2). Ikhuthaza amathambo nemisipha enempilo
Ukushoda kwe-Magnesium kuholela ekuguguleni komlenze namathambo abuthakathaka, ikakhulukazi esemdala. I-Magnesium L-threonate nayo ingalapha i-osteoporosis okuyisimo esivamile kubantu abadala asebekhulile. Ngakolunye uhlangothi, abasubathi bathatha lesi sidakamizwa ukuze sibasize ekuvuseleleni izicubu ngemuva kokuzivocavoca futhi kukhiqizwa amandla we-aerobic ne-anaerobic.
Izinzuzo ze-magnesium L-threonate ziningi, futhi umuthi usetshenziselwa ukwelashwa kwezimo ezehlukene zezempilo. Isibonelo, umuthi usetshenziselwa ukudambisa izinhlungu ngemuva kwe-hysterectomy, ukuhlinzwa, nobuhlungu besifuba obuvela emithanjeni evalekile. IMagnesium L-threonate nayo ibambe iqhaza elibalulekile ekwelapheni ukulahlekelwa ukuzwa, isifo sikashukela, i-fibromyalgia, nokwehlisa amazinga e-cholesterol phakathi kwezinye izimo zezempilo.
Malini I-Magnesium L-threonate kufanele ngithathe?
I-Magnesium L-threonate yisidakamizwa somlomo esithathwa ngomlomo. Isidakamizwa sitholakala ngesimo sethebhulethi kanye ne-powder. Noma kunjalo, umthamo we-magnesium L-threonate kuya ngomsebenzisi nangesimo aselashwa. Udokotela wakho uzoba umuntu ongcono kakhulu wokukubekela isilinganiso esifanele. Yize kukhona lapho umbono wabakhiqizi bezithelo abakhiqiza ngaso sonke isikhathi baya kohlolwa ngokwelashwa njengoba izinhlelo zomzimba womuntu zihlukile.
Umthamo we-magnesium L-threonate onconyiwe weminyaka engu-19-30 uneminyaka engama-400mg (amadoda) no-310mg ngosuku kwabesifazane. Okweminyaka engama-31 nabesilisa abadala kufanele bathathe ama-420mg nabesifazane ama-320mg ngosuku. I-Recommended Dietary Allowance (RDA) yabesifazane abakhulelwe abaphakathi kweminyaka eyi-14 kuya kwengu-18 ingu-400mg, kanti labo abavela eminyakeni engu-19-30 bangu-350mg kuthi iminyaka engama-31-50 kube ngu-360mg.
Abesifazane abanomdlandla futhi bangasithatha lesi sidakamizwa kanjena; Iminyaka engu-14-18 ingama-360mg ngosuku, umthamo onconyiwe oneminyaka engu-19-30 ubudala ngu-310mg ngenkathi iminyaka engama-31-50 umthamo usondele ku-320mg. Umthamo we-magnesium L-threonate nsuku zonke osezingeni eliphakeme kunoma ngubani oneminyaka engaphezu kweyisishiyagalombili ubudala ungama-350mg, futhi lokho kufaka phakathi ukuncelisa nabesifazane abakhulelwe.
I-Magnesium L-threonate isetshenziswa ekwelapheni kwezimo ezahlukahlukene zempilo, futhi umthamo nawo uhluka kumsebenzisi ngamunye. Isibonelo, ekwelashweni kwe-indigestion (dyspepsia), umthamo ophakanyisiwe osukela ku-400-1200mg kufanele uhlukaniswe kuze kufinyelele kane ngosuku.
Ukuze uthole imihlomulo efanelekile yokuqonda, umthamo onconyiwe yi-1000mg okufanele uphathwe kabili ngosuku. Lapho uthatha iMagnesium L-threonate ezinkingeni zokulala, umthamo ofanele uphakathi kwama-400-420mg ngosuku kwabesilisa nama-310-360mg kwabesifazane. Konke kukho konke, iMagnesium L-threonate (778571-57-6) isilinganiso siyahlukahluka kuye ngomunye umsebenzisi; ngakho-ke, qiniseka ukuthi uthola imithi efanele kumuthi wakho.
WUkudla kwezigqoko kuphakeme ngaphakathi I-Magnesium L-threonate?
Ngaphandle kokuthatha I-Magnesium L-threonate ukuthuthukisa amazinga we-magnesium ebuchosheni bakho, futhi ungasebenzisa ukudla okunothile kulawa amaminerali. Lokhu kudla kungakusiza ukuthi uthole amazinga adingekayo we-magnesium engqondweni yakho futhi ujabulele zonke izinzuzo zamaminerali. Nazi ezinye zokudla okuphezulu okunothe nge-Magnesium L-threonate;
Chocolate Dark- konke okumnandi futhi kunempilo, kuthwala i-64mg ye-magnesium eyi-16% ye-RDI. Ngaphandle kwalokhu, ushokoledi omnyama futhi ucebile ngethusi, i-iron ne-manganese kanye ne-prebiotic fiber.
ukwatapheya- lesi sithelo esimnandi nesinempilo singakunika i-58mg ye-magnesium ecishe ibe ngu-15% we-RDI. Izithelo nazo zicebile ngamavithamini B, K, nomthombo omuhle we-potassium.
AmaNutsare- eyaziwa nangokuthi ngomunye wemithombo yemvelo enhle ye-Magnesium L-threonate. Amawasheya akhonza i-1-efi anezinkulungwane ezingama-82mg ezingama-20% we-RDI.
I-Legumessuch– njengoba uphizi, i-lentil, ama-chickpeas, no-soya ubhontshisi kucebile ngamaminerali ahlukahlukene, kufaka phakathi i-magnesium. Isibonelo, inkomishi eyodwa kabhontshisi ephekiwe iqukethe i-120mg ye-magnesium, futhi lokho kungama-30% we-RDI.
Kukhona okunye ukudla okufana neTofu, imbewu ye-chia, imbewu yethanga, inhlanzi enamafutha, ukusho okumbalwa. Xhumana nomondli wakho wezempilo ukuthola eminye imininingwane mayelana nalokhu kudla okugcwele i-magnesium.
Thenga magnesium L-threonate online
I-Magnesium L-threonate powder iyisidakamizwa esitholakala kalula ezitolo zomzimba neziku-inthanethi. Ungathenga lo muthi ngokunethezeka kwehhovisi lakho noma ekhaya bese ulinda ukulethwa okufanele kwenziwe ngumhlinzeki othembekile ngesikhathi esifushane ngangokunokwenzeka.
Xhumana nodokotela wakho ukukuqondisa ekutholeni ikhwalithi ye-Magnesium L-threonate futhi nakumthengisi odumile futhi onolwazi. Okuhlukile online Ama-Nootropics depots Hlanganisa lesi sidakamizwa kufaka i-Walmart, i-Amazon, ne-Magnesium L-threonate i-vitamin Shoppe.
Kukhona nabanye abathengisi abaku-inthanethi kepha njalo yenza ucwaningo lwakho ukuthola eminye imininingwane mayelana nomthengisi we-Nootropic ngaphambi kokwenza i-oda lakho. Ukuthengwa kwe-Magnesium L-threonate kufanele kuphathwe ngokunakekela njengokuthatha ikhwalithi ephansi, noma umuthi mbumbulu ungakudalula emiphumeleni emibi.
Funda izibuyekezo ze-Nootropics ukwazi kabanzi mayelana nabathengisi be-inthanethi be-Magnesium L-threonate online. Njengamanje, i-amazon L-threonate amazon neMagnesium L-threonate Walmart yimithombo yeNootropic ethandwa kakhulu. Izitolo eziku-inthanethi zingcono kakhulu njengoba zikuvumela ukuthi uthengele okuhlukile Izithasiselo ze-Nootropic ngocingo lwakho, i-laptop, noma ithebhulethi. Bheka ukuthi umkhiqizo uzothatha isikhathi esingakanani ukuhanjiswa endaweni yakho bese ukhetha okungcono kakhulu kuwe.
IMagnesium ingumbiwa obalulekile wokuthuthukisa ukusebenza kwengqondo, ukuthuthukisa ukulala, nokunciphisa izimpawu zokuguga ebuchosheni kanye nokwenza ngcono amaseli omzimba nezitho zomzimba ezisebenzayo. Kukhona okuhlukile imithombo ye-magnesium, kusuka emithini kuya ekudleni kwemvelo. Ukuntuleka kwe-magnesium kuveza abantu ezimeni ezahlukahlukene zezempilo njenge-ADHD. Kodwa-ke, ukuthuthukiswa kweMagnesium L-threonate ADHD kuyizindaba ezimnandi kubantu abanamazinga aphansi we-magnesium njengoba kubonakale njengesidakamizwa esinamandla sezimpawu zokushoda kwamaminerali. Lesi sidakamizwa sisetshenziselwa nezinye izindlela zokwelapha njengokuqeda izinhlungu ngemuva kokuhlinzwa nokukhulisa amathambo nempilo yemisipha.
Uma ubheka ukubuyekezwa okuhlukahlukene kwe-L-threonate kwe-magnesium, ungasho ngesibindi ukuthi iphakathi komthombo omkhulu we-magnesium. I-Magnesium L-threonate iyisidakamizwa esingokomthetho, kepha kufanele usithathe ngaphansi kokuyalelwa ngudokotela ukuze uthole imiphumela engcono. Umuthi uyatholakala ezitolo zombili nasezi-inthanethi. Ungalokothi uguqule umthamo phezulu noma phansi ngaphandle kokutshela udokotela wakho. Uma kwenzeka wanemiphumela emibi xhumana nomuthi wakho ngokushesha. Ngeminye imininingwane mayelana ne-magnesium L-threonate nokunye ama-nootropics ayathenga, thintana nabasebenza kwezokwelapha.
ILanga, Q., Weinger, JG, Mao, F., & Liu, G. (2016). Ukulawulwa kokuqina kwesakhiwo nokusebenza kwe-synapse nge-L-threonate ngokusebenzisa ukuguquguquka kokuhlushwa kwe-intraneuronal magnesium. I-Neuropharmacology, 108, I-426-439.
UMazreku, IN, Ahmetaj, H., Aliko, V., Bislimi, K., Halili, F., & Halili, J. (2017). Umsebenzi weCatalase (CAT), ALT kanye ne-AST kuzinhlaka ezihlukile zamagundane aseSwitzerland Albino Aphathwe nge-Lead Acetate, Vitamin C neMagnesium-L-Threonate. Ijenali Yocwaningo Lomtholampilo Nokuxilonga, 11(11).
UMickley, GA, Hoxha, N., Luchsinger, JL, Rogers, MM, & Wiles, NR (2013). Ijubane lokudla okungapheli le-magnesium-L-threonate linciphisa futhi linciphise ukuvuselelwa okuzenzakalelayo kokuphikisana nokunambitheka okunesimo. Pharmacology Biochemistry kanye nokuziphatha, 106, I-16-26.
Abumaria, N., Luo, L., Ahn, M., & Liu, G. (2013). Isengezo seMagnesium sithuthukisa ukuhlukaniswa kwephethini yendawo-nokuvikela ukwesaba ukwenziwa ngokweqile. Ikhemisi lokuziphatha, 24(4), i-255-263.
1.Yini iMagnesium L-threonate?
2. Ngabe isebenza kanjani iMagnesium L-threonate?
3.I-Magnesium L-threonate ilungele ukulala?
Umthelela wokubuyiselwa kwengqondo we-Magnesium L-Threonate
5.Yiziphi ezinye izinzuzo ze-magnesium L-threonate?
6.Kumele ngithathe malini iMagnesium L-threonate?
7.Kuphi ukudla okuphezulu eMagnesium L-threonate?
8.Thenga iMagnesium L-threonate online
I-Anandamide (AEA): Konke Odinga Ukwazi Ngakho